Consiglio di oggi 15 Settembre 2020 di San Luigi Maria Grignion de Montfort | Ilblogdellapreghiera
Nzukọ nke taa 15 Septemba 2020 nke St. Louis Maria Grignion de Montfort
Paolo Tescione	Edere ya Septemba 15, 2020 Septemba 15, 2020
Abụrụ. Louis Maria Grignion de Montfort (1673-1716)
onye na-ekwusa ozi ọma, onye guzobere obodo okpukperechi
Mee ọgwụgwọ na ezi nsọpụrụ nye Nwanyị a gọziri agọzi, § 214
Mary, nkwado maka iburu obe
Nsọpụrụ Marial bụ ụzọ ohere iji rute n'otu n'ime Onyenwe anyị, nke bụ izu oke nke Onye Kraịst; ọ bụ ụzọ nke Jizọs Kraịst mere ka ọ bịakwute anyị, na nke enweghị ihe mgbochi ịbịakwute ya.
N'eziokwu, enwere ike ịnweta mmekọrịta site na Chineke site n'okporo ụzọ ndị ọzọ; ma anyị ga-agafe ọtụtụ obe karịrị akarị, ọkachasị ọnwụ na ọtụtụ nsogbu ndị ọzọ, nke anyị na-agaghị emeri n’ụzọ dị mfe. Ọ ga-adị mkpa ịgafe ọchịchịrị abalị, ọgụ mgba na nhụjuanya, ugwu ndị dị elu, ogwu na-egbu mgbu na ọzara dị egwu. Mgbe anyị nọ n'ụzọ nke Meri, anyị ga-eji nwayọ nwayọ nwayọ.
N’ezie, anyị na-ahụkwa mgba dị ukwuu iji lụso ọgụ na nsogbu isi ike imeri; mana ezigbo Nne na Onye Nkụzi a na-eme onwe ya ugbu a ma na-akpachi anya ndị ohu ya iji kọwaara ha ọchịchịrị, iji nyere ha aka na obi abụọ ha, ịkasi ha obi na ụjọ ha, ịkwado ha na mgba na nsogbu ha, na n'eziokwu ụzọ a nke amaghị nwoke iji chọta Jizọs bụ ụzọ nke Roses na mmanụ a honeyụ na-atụnyere ndị ọzọ.
← Na post gara aga Gara aga post:Nraranye na ekpere nye Nwanyị Nwanyị Mmebi na mkpughe nke Santa Brigida
Ọzọ Post → Post ozo:Gịnị bụ ofufe?